Gaari Tahriibayaal Saarnaayeen Oo Ku Qalibmay Dalka Liibiya | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Gaari Tahriibayaal Saarnaayeen Oo Ku Qalibmay Dalka Liibiya
Liibiya(OWN)- Wararka ka imanaya dalka Libya ayaa sheegaya in gaari ay ka buuxeen dad tahriibayaal ah oo Afrikaan ah ayaa maanta ku geddoomey waddanka Libya.
Magaalada Bani Walid waxa ay caan ku tahay magafayaasha waddamada jaarka ah ka soo kaxeeya dadka tahriibayaasha ah ee ka soo jeeda waddamada Saxaraha ka hooseeya ee Africa. Dadkan ayaa dabadeed loo gudbiyaa xeebaha Libya si Italy loogu sii gudbiyo.
Libya waxa ay caan ku tahay magafayaasha lacagta ka sameeya tahriibinta dadka doonaya inay Yurub u gudbaan. Tahriibayaasha ayaana la kulma jirdil iyo dhibaato badan oo ay u geystaan magafayaasha reer Libya. Beryahan danbena waxa la soo sheegayaa in sidii ay u dhacday dawladdii Qaddaafi ay xaaladda Libya gacanta ka baxdey, dadka madaw ee tahriibayaasha ahna la addoonsado iyada oo loo sameeyey suuqyo lagu kala gato.
Soomaalidu waxa ay tan iyo wakhtiyadii uu bilawday tahriibku kow tahay qowmiyadaha ugu badan ee ku le’da Saxaraha Libya iyo weliba badda Mediterranean-ka. Ilaa haddana, dawladda Soomaaliya si buuxda wax ugama aysan qaban dhibaatada tahriibka oo faro ba’an ku haya dhallinyarada Soomaaliyeed oo dalka uga cararaya dhibaatooyinka argagaxisa iyo dhaqala’aanta.